नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : सिचाइ मन्त्री उमेश कुमार यादवले सिचाईसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी मैथिली भाषामा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए !
सिचाइ मन्त्री उमेश कुमार यादवले सिचाईसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी मैथिली भाषामा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए !
नेपाली भाषा नबुझ्ने भएछन नेपालीहरु ! कस्तो बन्दै छ नेपाल ?? कता जाँदैछ नेपाल ?? यो सानो समाचारले पनि ठुलो समाचार बोकिरहेको छ ।
सिचाइ मन्त्री उमेश कुमार यादवले सिचाईसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी मैथिली भाषामा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । महोत्तरी जिल्ला सिचाई डिभिजन कार्यालय तथा त्यस मातहतका कार्यलय अनुगमन गर्ने क्रममा त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन । सिचाई कार्यालयबाट के के सुविधा पाईन्छ, माग फारम तथा अन्य फारमहरू कहाँ पाईन्छ भन्ने कुराको समेत जानकारी नभएकाले बुझ्ने भाषामा सूचना प्रकाशन गर्न उहाँले निर्देशन दिए । टाढा गाउँमा बस्ने किसानहरू एउटा फारमकै लागि कार्यालय
धाउनु पर्छ, त्यो राम्रो होइन, उहाँले भन्नुभयो, गाविस कार्यालय, पुस्तकपसलहरूमा पनि फारम पाउने व्यवस्था गर्नुस् । माग फारमहरू सहज रूपमा पाउनु पर्छ ।